पराजुलीको ‘कविता कविताहरू’ सार्वजनिक |
पराजुलीको ‘कविता कविताहरू’ सार्वजनिक
प्रकाशित मिति :2018-02-04 17:01:13
काठमाडौ । कवि कविता पराजुलीको कविता सङ्ग्रह ‘कविताका कविताहरू’ सार्वजनिक गरिएको छ । दायित्व वाङ्मय प्रतिष्ठानको आयोजनामा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभाहलमा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रा. राजेन्द्र सुवेदीले भने, ‘कविता पराजुलीका कविताहरू सरल भइकन पनि गहन र संवेद्य छन् । अध्यात्म दर्शन मिश्रित छन् र पूर्वजप्रति सम्मान दर्शाउन सफल छन् ।’
कृतिमाथि समीक्षा गर्दै डा. लेखप्रसाद निरौलाले कृतिभित्रका कविताहरू प्रथम चरणका भएर पनि उत्कृष्ट र मर्मस्पर्शी भएको बताए । उनले भने, ‘कविता पराजुलीको कवितायात्रा अत्यन्त उज्ज्वल छ । उहाँले निरन्तर काव्यसाधना गर्दै गए जानुभयो भने कविताक्षेत्रमा सफलता पाउनुहुनेछ ।’
दायित्व वाङ्मय प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामप्रसाद पन्तको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त समारोहमा कवि कविता पराजुलीले कविता वाचनसहित आफ्नो मन्तव्य राखेकी थिइन् भने कवि ठाकुर शर्मा भण्डारी, डा. विजया पन्त, डा. श्रीया पराजुली, कल्पना नेपाल र यादव भट्टराईले समेत मन्तव्य राखेका थिए ।